musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Tourism Haisi Kukatyamadza iyo Pamusoro peiyo Inogona
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Investments • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kunyangwe nekubudirira kukuru kwekushanya kweJamaica kwaive kuri kusangana pamberi penjodzi yeCOVID-19, iyo Gurukota rezvekushanya muJamaica Hon. Edmund Bartlett anotenda kuti vakangokwenya pamusoro penzvimbo huru yeiyi indasitiri.
Iko kune nhema mukana mune ino COVID-19 coronavirus dambudziko.
Kunyangwe paine kukanganisa kwakanyanya kwedenda kune hupfumi hwepasirese hupfumi, sezvo zvirongwa zvikaiswa pamwe nekugadzwa panzvimbo yekuvakazve, ino ndiyo nguva yakakwana yekufungidzirazve indasitiri.
Uyu mukana wekugadzira chigadzirwa chekushanya chakachengeteka, chinosanganisa, chinogadzikana, uye chichigadzikana.
Gurukota Bartlett vataura pamusangano weCaribbean Alternative Investment Association (CARAIA) wakaitirwa ku AC Hotel naMarriott muNew Kingston, Jamaica, nhasi, 29 Chikunguru 2021. Verenga - kana teerera - zvaakataura.
Tourism ndeimwe yemabhizimusi makuru uye ari kukurumidza kukura, kutyaira kusimudzira hupfumi, kusimudzira kudyara, kugadzira mabasa, nekusimudzira magadzirirwo.
Iyo pre-denda nhamba inotaurira nyaya. Mu2019, indasitiri inobudirira yepasirese uye yekushanya yakaverengera 10.4% yeGDP yepasi rose uye yakatsigira raramo yevanhu mamirioni 334 (10.6% emabasa ese). Zvichakadaro, mari dzevashanyi vekunze dzakasvika US $ 1.7 trillion.
Nharaunda, nzvimbo dzekuCaribbean dzakagamuchira vanofungidzirwa makumi matatu nemaviri emamiriyoni evashanyi vekunze, vakapa madhora US $ 32.0 mabhiriyoni emadhora kuGDP yenyika, US $ 59 bhiriyoni mukushandisa kwevashanyi, uye vakatsigira mabasa emamirioni 35.7 (2.8% yebasa rese).
Ipo irimuno, 2019 raive rekodhi-rekuvhuna gore revashanyi vanosvika uye mibairo. Isu takagashira 4.2 mamirioni evashanyi, chikamu chakawana US $ 3.7 bhiriyoni, chakapa 9.8% kuGDP yenyika, chakaverengerwa 17.0% yeEkunze Direct Investment (FDI) uye chakagadzira zvimwe zviuru makumi manomwe zvemabasa zvakangobata zvisina kunangana imwe zviuru zana.
Pre-dambudziko, kushanya kwakadzingawo 15% yekuvaka, 10% yemabhengi nemari, 20% yekugadzira uye 21% yezvishandiso pamwe nezvekurima nehove. Pakazara, chikamu chekushanya chakakura ne36% mumakore makumi matatu apfuura zvichipesana nekukura kwehupfumi kwe30%.
Kana iwe ukawedzera kuti Jamaica iri muCaribbean, iyo yepasirese inovimba nenharaunda, ipapo unogona kunzwisisa kukosha kwekushanya kuJamaica's yakafara post-denda kupora kwehupfumi.
Investment mukushanya inopa imwe yeakanakisa mikana yeJamaica kudzoreredza nekusimbisa hupfumi hwayo. Naizvozvo, ndiri kufara kuve ndakokwa kuti nditaure nevamiriri veCaribbean Alternative Investment Association (CARAIA) nhasi kuti tikwanise kutsvaga mikana yekudyara kwekushanya iyo ichasimudzira kukura kweindasitiri iyo inopa zvisingaenzaniswi kumagariro uye hupfumi hwevanhu vedu. .